Kheyraadka muuqaalka ee mashaariicdeena xirfadeed: icons | Abuurista khadka tooska ah
Judith Murcia | | Astaamaha
Hayso wax weyn kheyraad kala duwan Waxay sahlaysaa fulinta howlaha la qabanayo waana noo oggolaan doontaa dabacsanaan weyn. Haysashada liistada bogagga bilaashka ah ee soo dejinta ayaa ah khiyaanooyin yar yar oo way dadajinayaan shaqada.
Qoraalkan waxaad ku ogaan doontaa bogagga ugu fiican astaamaha iyo dulinka bilaash ka jira internetka maanta.
1 Flaticons "qaabeynta qaabeynta" ilaha qaabka
2 Icons8, ilo leh qaabab kala duwan
Flaticons "qaabeynta qaabeynta" ilaha qaabka
Boggan annaga ayaa na ku xirmooyinka ama qaybaha icons oo ku takhasusay astaamaha "flat design". Kaliya gal guriga, a raadsadey halkaas oo ay tahay inaan ku qorno magaca curiyaha aan raadineyno. Maskaxda ku hay in ay tahay bog ku hadla Ingiriisiga, sidaa darteed, waxaan arki doonaa natiijooyin dheeri ah haddii waxaan ku qornaa ingiriis. Waxyaabaha la muujiyo iyo qodobka ku habboon boggan ayaa ah in ilaha aan raadineyno lagu soo dejisan karo qaabab kala duwan: PNG, SVG, EPS, PSD.
Waxa kaliya ee ay websaydhku innagaaga baahan yihiin heerka liisanka ayaa ah in aynnu tixgelinno qoraaga haddii ay dhacdo in aan ugu adeegsanno mashaariicdeenna qaab dadweyne ama ganacsi. Waxaan sidoo kale heysanaa ikhtiyaarka ah inaan ku biirno “Premium”Kaas oo nooga faa’iideysan doona in ka badan hal milyan oo icons dheeraad ah.
La Faa'iidada lahaanshaha astaamo kooxeed Baakadaha ayaa ah inaan si dhakhso leh oo fudud u heli doonno astaamo ku jira isla qaybta, taas oo ah, haddii, tusaale ahaan, aan raadinno ereyga "guri", natiijooyinka waxay na siin doontaa ikhtiyaar aan ku soo dejisanno alaabta guryaha: miisaska , kuraasta, laambadaha, iyo kuwo kale.
Icons8, ilo leh qaabab kala duwan
Icons8 waa inaan ku diiwaan-hayaha si aad uhesho ikhtiyaarro badan oo soo dejin ah. Maaha gebi ahaanba lagama maarmaan, maadaama aan heli karno iyaga oo aan bixin xog, laakiin dhab ahaan ma heli doonno cabirka la doonayo.
Astaamaha ay websaydhkani na siiso ayaa runtii xiiso leh, hal-abuur leh oo la shaqeeyay. Waxaan leenahay noocyo kala duwan oo ka badan 80.000 icons bilaash ah.
Waxa ugu cajaa'ibka badan ee ku saabsan degelkan ayaa ah in markaan fulino baaris, dhanka bidix aan awoodno dooro qaabka waan raadineynaa. Aan soo qaadano tusaale si aan si fiican u fahamno. Haddii aan qoreyno ereyga "guri" waxaan kala dooran karnaa inta u dhexeysa qaab naqshadeynta fidsan, midab ahaan, dhibco leh, wareegsan, iyo ikhtiyaarro badan oo dheeri ah.
En Internetka waxaan leenahay dalab badan oo bogag internet ah leh astaamo isku mid ah, laakiin labada kor ku xusan ma bixiyaan khaladaad, ama dhibaatooyin guud ahaan. Sidoo kale waa la mahadiyey taas ha u muuqan xayeysiis markasta oo aan gujino. Sidaa darteed, FlatIcons iyo Icons8 waa ilo gebi ahaanba lagu talin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Kheyraadka sawirka: icons